Fitarafana « Echographie » Ankoatra ny vohoka dia ny olana amin’ny kibo ny ankabeazany manao izany
Hatraiza, ho anao, no tokony ho fetran’ny hasarotam-piaro?
Mija Kamisy: Amin'ny ankapobeny aloha, tokony tsy dia ho saro-piaro be loatra fa manimba zavatra, satria lasa mijaly isika ary tsy ho tafatombina no sady mahasorena ny farany. Voalohany indrindra, tokony ho fantarina tsara ny toetran'ilay vady, fantarina ny sehatra iasany, na ihosonany, ny fialam-boliny.
Fiterahana any amin’ny hopitaly : Ny 38% n’ny vehivavy malagasy ihany no manao izany
Madagasikara no manana taha ambony indrindra raha mahakasika ireo vehivavy maty am-piterahana. Raha ny tarehimarika avy amin’ny Sampandraharahan’ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana “OMS” dia zaza 478 no maty amin’ireo 100.000 teraka ary 38% monja ny taham-piterahana eny amin’ny tobim-pahasalamana eto Madagasikara.
« Maman kangourou”, fomba iray hikoloana ireo zaza teraka tsy tonga volana Nitsangana any Nosy Be ny ivon-toerana faha 13 eto Madagasikara
Fomba iray hikarakarana ireo zaza teraka tsy tonga volana ny « méthode kangourou ». Araka ny anarany dia fizarana hafanana amin’ny zaza teraka talohan’ny fotoana tokony hahaterahany amin’ny alalan’ny fametrahana azy eo amin’ny tratran’ny reniny toy ireny « kangourou » mitondra ny zanany ireny ity fomba iray ity.
« Gainage » iray volana, azo antoka fa fisaka tanteraka ny kibo
Fomba hafa kely handrafetana ny bika sy hanafisahana tanteraka ny kibo ao anatin’ny iray volana no atoro anao eto. Mety indrindra ho an’ireo tsy dia manam-potoana firy hatokana hanaovana spaoro izy ity. Fanamby atao ao anatin’ny 1 volana mantsy no atao, ary hiandrasana vokatra feno ao aorian’izay.
Bevohoka : Mahazo mihinana « antibiotique » ve ?
Mila fitandremana be mihitsy ny vohoka ka isan’ireo saro-pady indrindra ny fihinanana fanafody mahery vaika toy ny « antibiotique ». Inona no tokony atao ? Ary misy fanafody mety mahasolo ny « antibiotique » ve ?
Mora mitoe-jaza ny vehivavy nalana kambon-tenda sy kambon-tsinay
Araka ny nambaran’ny fikarohana iray natao tany Angletera dia mora mitoe-jaza kokoa ireo vehivavy efa nalana kambon-tenda na kambon-tsinay (apendicite), raha oharina amin’ireo vehivavy hafa. Tsy fantatra mazava tsara anefa, hatreto, ny anton’izany.
Sandra M. : Nahita fanafana ho an’ny homamiadan’ny nono
Tovovavy avy ao Sierra Leonne Afrika Andrefana, mandranto fianarana ao amin’ny Oniversiten’ny Siansa sy ny Teknlolojia ao Abuja, Nizeria i Sandra Musujusu.
Ankoatra ny vohoka dia isan’ireo hanatonana ireny ivon-toerana na dokotera mpanao “echographie” ireny ny aretin’ny kibo mifandraika amin’ny taovam-pananahana. Ity farany, araka ny nambaran’ny dokotera Fidy Bariniaina, mpitsabo etsy amin’ny “echographie” Fidy Anjanahary,
no ankabeazan’ireo aretina tena handehanan’ny vehivavy ao aminy. Vehivavy, araka izany, no maro an’isa tena manao an’ity fitarafana amin’ny “ultra-son” ity. Misy ireo tonga ho azy mankany amin’ny dokotera, misy ihany koa anefa ireo nahazo taratasy manoka avy amin’ny dokotera. Tafiditra ao anatin’io aretin-kibo io moa, ankoatra ny taovam-pananahana, ny apandisita, ny zaza an-tsoson-koditra, ny mikraoba manodidina ny tranon-jaza, ny fivontosana amin’ny tranon’atodin’aina na tranon-jaza, ny fikorontanan’ny fadim-bolana. Ny hafa kosa, izay sady ahitana lehilahy sy vehivavy, dia ny fivontosan’ny atody tarimo manodidina ny tenda, ny “glande thyroïde”. Ho an’ity ivon-toerana ity dia miovaova ny isan’ireo olona tonga manao fitarafana. “Misy fotoana am-polony fotsiny ireo marary tonga, misy fotoana aza tsy misy mihitsy ary misy fotoana tena maro” hoy hatrany ny dokotera Fidy. Ary manoloana ireo ivon-toerana mpanao “echographie” izay miha-betsaka amin’izao fotoana izao dia nilaza ny dokotera Fidy fa nahazo fiofanana tamin’io asa io avokoa ireo dokotera amin’ireny ivon-toerana ireny ka tsy tokony hanana ahiahy ny olona.